SMS Spunbond + လွိုင်ကော် + Spunbond Nonwovens) Non- ယက်ထည် spunbond နှင့်အရည်ပျော်မှု၏ပေါင်းစပ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်, မြင့်မားသောခွန်အားနှင့်အတူ, ကောင်းသော filtration စွမ်းဆောင်ရည်, နှင့်မျှမပါဝင်ပါကော်, non-toxic, and other advantages. လက်ရှိအချိန်မှာ, ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေးလုပ်သားကာကွယ်သည့်ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်, ခွဲစိတ်ထုပ်,…
Down jacket manufacturer and supplierWith the progress of the times, အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းတီထွင်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်တချို့အလုပ်တွေရဲ့လုံခြုံမှုကနိမ့်ကျလာနေပြီ. သင်အာရုံမပေးဘူးဆိုရင်, သငျသညျခန္ဓာကိုယ်မှအချို့သောထိခိုက်စေနိုင်သည်. ထို့ကြောင့်, အချို့သောအလုပ်များတွင်အကာအကွယ်အဝတ်အစားများကိုအသုံးပြုရမည်. လက်ရှိအချိန်မှာ, there…
123နောက်>...1285 စာမျက်နှာ 1 ၏ 1285